Imfazwe yaseBrandywine kwi-American Revolution
Imfazwe yaseBrandywine - Imfazwe kunye nomhla:
Imfazwe yaseBrandywine yalwa noSeptemba 11, 1777, ngethuba leMelika yokuVikela (1775-1783).
Jikelele uSir William Howe
Imfazwe yaseBrandywine - Imvelaphi:
Ehlotyeni ka-1777, nomkhosi omkhulu uJohannes Burgoyne oya ngaseningizimu esuka eKhanada, umkhosi jikelele wemikhosi yaseBrithani, uSihlalo-jikelele uSir William Howe, walungiselela umkhankaso wakhe wokuthatha inkunzi yaseMelika eFiladelphia.
Ukushiya ibutho elincinane ngaphantsi kweGosa eliMkhulu uGenorge Clinton eNew York, waqala amadoda angama-13 000 ekuthuthweni aze ahambe ngomkhumbi. Ukufaka i-Chesapeake, iinqanawa zahamba ngasenyakatho kwaye umkhosi wafika kwiNtloko ye-Elk, MD ngo-Agasti 25, 1777. Ngenxa yeemeko ezingenanto kunye nodaka apho, ukulibaziseka kwabakho njengoko uHowe esebenza ukuze ahlalise amadoda kunye nezinto zakhe.
Emva kokuba uhambele eningizimu ukusuka kwizikhundla eziseNew York, amabutho aseMelika phantsi kweGenerali George Washington agxininise entshonalanga yeFiladelphia ekulindelekeni kweHowe. Ukuthumela ama-skirmishers phambili, amaMelika alwa nxamnye nekhola eHowe e-Elkton, MD. Ngomhla ka-Septemba 3, ukulwa kwaqhubeka kunye neqhinga kwiCooch's Bridge, DE . Ekuvukeni kwalolu daba, iWashington yahamba esuka kumgca wokuzimela emva kwe-Red Clay Creek, DE ngasentla ukuya kumgca omtsha emva koMlambo waseBrandywine ePennsylvania. Ukufika ngoSeptemba 9, wahambisa amadoda akhe ukuba aguqe umlambo.
Imfazwe yaseBrandywine - Indawo yaseMelika:
Efumaneka malunga nekota ukuya ePhiladelphia, umgca waseMelika wawukho kwiFowd yaseFood, wachaza indlela eyona ndlela ihamba ngayo kwisixeko. Lapha iWashington ibeke imikhosi phantsi koMagosa Jikelele uNathanael Greene noBrigadier General Anthony Wayne . Ngasekhohlo kwabo, ephethe uPyle's Ford, bekunye i-Pennsylvania yase-Pennsylvania ekhokelwa nguMagosa Jikelele uJohn Armstrong.
Ngakwesokudla, i- Major General uJohn Sullivan wahlula ummandla ophezulu emlanjeni kunye neFrinton's Ford kunye namadoda amakhulu kaMninimandla ka-Adam aseSt Stephen.
Ngaphandle kwecandelo likaStephen, kwakukho i- Major General Lord Stirling eyayibanjwe i-Ford yePainter. Kwinqanaba elide laseMelika, elaligcinwe eSigrling, yayisigqeba phantsi koMphathiswa kaMoses Hazen oye wabelwa ukuba abukele i-Wistar neBuffington's Fords. Emva kokuba emise umkhosi wakhe, iWashington yayinethemba lokuba wayeyinqabele indlela eya ePhiladelphia. Ukufika eKennett Square ukuya ngasentshona-ntshona, uHowe wagxininisa umkhosi wakhe waza wavavanya indawo yaseMerika. Esikhundleni sokuzama ukuhlasela ngokuthe ngqo kumigca yaseWashington, uHowe wakhetha ukusebenzisa isicwangciso esifanayo esafinyelele ukunqoba nyaka ngaphambi kweLong Island ( Imephu ).
Imfazwe yaseBrandywine - Isicwangciso seHowe:
Oku kubandakanye ukuthumela amandla ukulungisa i-Washington endaweni ngenkathi ehamba kunye nenqwaba yempi ejikeleze i-American flank. Ngaloo ndlela, ngoSeptemba 11 iHowe yalela uLieutenant General Wilhelm von Knyphausen ukuba aqhubele phambili kwiFodd's Ford kunye namadoda angama-5 000, ngoxa yena kunye noMninimandla Jikelele weNkosi uCharles Cornwallis bathuthele ngasenyakatho kunye nentsalela yomkhosi. Ukuphuma nge-5: 00 ekuseni, ikholomu yaseConwallis yawela iWestern Branch yaseBrandywine eTrmble's Ford, yajika yajika yawela empilweni ye-East eYeffrie's Ford.
Ukujika ngasemzantsi, baqhubela phezulu e-Osborne's Hill kwaye bekunokumelana ne-American back.
Imfazwe yaseBrandywine - iPlanked (kwakhona):
Ukuphuma nge-5: 30 ekuseni, amadoda kaKnyphausen ahamba ecaleni kwendlela eya kwiFowd yaseFowd aze aqhube ama-skirmisher aseMelika aholwa ngu-Brigadier General William Maxwell. Iimpawu zokuqala zokulwa zaxoshwa eWelch's Tavern malunga neekhilomitha ezine entshonalanga yeFood's Ford. Ukuqhubela phambili, ama-Hesse enza iqela elikhulu kwilizwekazi lase-Old Kennett kwindlu yokuhlangana yase-Old-ken. Ekugqibeleni befika kwibhankini esecaleni kwimeko yaseMelika, amadoda kaKnyphausen aqala ukuhlaselwa iibhobholo. Ngaloo mini, iWashington yafumana iingxelo ezahlukahlukeneyo zokuthi uHowe wayezama ukuhamba ngomkhonto. Nangona oku kwakhokelela ekubeni umlawuli waseMerika ucinge isiteleka ku-Knyphausen, waxhomekeka xa efumana ingxelo enye eyamqinisekisa ukuba ayengalunganga.
Malunga no-2: 00 ntambama, amadoda akwaHowe abonwa njengokuba afika e-Osborne's Hill.
Ngentlanzi yeLucky eWashington, iHowe yema entabeni kwaye yaphumla iinyanga ezimbini. Leli khefu lavumela uSullivan, uStephen, kunye noStrling ukuba bathathe ngokukhawuleza umgca omtsha obhekene nosongelo. Lo mgca omtsha wawuphantsi kolawulo lukaSullivan kunye nomyalelo wecandelo lakhe laza lafika kuBrigadier General Preudhomme de Borre. Njengoko iimeko zikaChadd's Ford zabonakala zizinzile, iWashington yazisa uGreene ukuba alungele ukuhamba ngasentla ngezaziso zesikhashana. Malunga no-4: 00 ntambama, uHowe waqala ukuhlasela kwakhe kumgaqo omtsha waseMelika. Ukuqhubela phambili, ukuhlaselwa kwangoko kwaphazamisa esinye sezigqeba zikaSullivan ezibangela ukubaleka. Oku kungenxa yokuba kungaphandle kwesimo ngenxa yechungechunge lwemiyalelo engabonakaliyo ekhishwe ngu-Borre. Ngesobunxele bengenamkhethe, uWashington wabiza iGrene. Kwimizuzu engamashumi asibhozo emininzi imfazwe enzima yajikeleza kwiNdlu yeNtlanganiso yeBirmingham kwaye yintoni eyaziwa ngokuba yi-Battle Hill kunye neBrithani ngokukhawuleza iqhube amaMelika.
Ukuhamba ngeekhilomitha ezine ezimangalisayo kwiminithi engamashumi amane anesihlanu, amajoni aseGreene ajoyina i-fray around 6:00 PM. Exhaswe yimali ye-Sullivan kunye no- Colonel Henry Knox , i-Washington ne-Greene yanciphise iBrithani kwaye yavumela ukuba yonke impi ihoxise. Nge-6: 45: 00, ukulwa kwacima kwaye iGrigadier General uGeorge Weedon wayenomsebenzi wokugubungela ukufuduka kweMerika ukusuka kuloo ndawo. Ukuva imfazwe, uKnyphausen waqala ukuhlaselwa kwakhe eFeod's Ford ngeentonga kunye neentsika ezihlasele ngaphesheya komlambo.
Ukudibanisa noWayne Pennsylvanians kunye noKawellwell's lightly's infantry, wayekwazi ukunyanzelisa abantu baseMelika abakhulu. Ukudibanisa kuwo onke udonga lwamatye kunye nocingo, amadoda kaWayne atshabalalisa intshaba eqhubela phambili kwaye akwazi ukugubungela i-Armstrong yama-militia awazange asebenze ekulweni. Ukuqhubeka ukubuyela endleleni eya eKester, uWayne wayesebenza ngobuchule ngamadoda akhe kwaze kwaba yilapho imfazwe ihamba nge-7: 00.
Imfazwe yaseBrandywine - Emva kwexesha:
Imfazwe yaseBrandywine yabiza iWashington malunga ne-1 000 yabulawa, yalimala, yabanjwa kunye neninzi yeentonga zakhe, ngelixa ilahlekile yaseBrithani yayingama-93, i-488 yalimala, kunye ne-6 ilahlekile. Phakathi kwabamazwe aseMerika kwakukhona uMarquis de Lafayette owayesanda kuza. Ukubuya kwiBrithywine, umkhosi waseWashington wabuyela kuChester uvakalelwa kukuba uphelelwe yimfazwe kwaye unqwenela ukulwa. Nangona iHowe iphumelele ukunqoba, ayizange ibhubhise umkhosi waseWashington okanye iphumeze ngokukhawuleza impumelelo yakhe. Kwiiveki ezimbalwa ezalandelayo, imikhosi emibini yenza iqela lokuqhubela phambili elabonile imikhosi elwela ukulwa ngoSeptemba 16 kufuphi neMalvern no-Wayne batshabalalisa ePaoli ngoSeptemba 20/21. Kwiintsuku ezintlanu kamva, uHowe ekugqibeleni waphumelela eWashington waza waya ePhiladelphia engathandabuzekiyo. Iimpi zombini zilandelayo zadibana kwi- Battle of Germantown ngo-Oktobha 4.
HistoryNet: iMfazwe yaseBrandywine
Amabutho aseBritani: iMfazwe yaseBrandywine
Ibutho leMfazwe yaseBrandywine
Ngo-1967 I-Ford Mustang Yomzekelo weNgxelo Yonyaka